Huawei na-egosi beta ọrụ nke HarmonyOS 2.0 maka ekwentị mkpanaaka | Akụkọ akụrụngwa
Huawei na-egosi beta ọrụ nke HarmonyOS 2.0 maka ekwentị
E gosipụtara ngosipụta beta nke sistemụ arụmọrụ nke Huawei mepụtara maka njedebe ya na HDC 2020 na Bejing. Sistemụ nrụọrụ nke na-abịa iji dochie gam akporo dị ka injin nke njedebe ya. Mmasị ngwa mmepe nwere ike ugbu a na-arịọ HarmonyOS mbipute 2.0 na ukara Huawei Developer website. Versiondị a na-abịa ịkwado arụmọrụ na mmepe ngwa, na-enye ọtụtụ API na ngwaọrụ dị ike dị ka DevEco Studio simulator.
Site na mmegharị a, ọ chọrọ imeghe ọnụ ụzọ ọhụụ maka ndị mmekọ ọhụụ na gburugburu ebe obibi ya yana ka ha nye ohere ịnweta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na ọrụ ya. HarmonyOS chọrọ ịbụ onye ọsụ ụzọ ma a bịa n'iji teknụzụ 5G mee ihe iji meziwanye arụmọrụ ya mgbe ị na-eme nchọgharị ma ọ bụ meziwanye mmekọrịta dị n'etiti ndị anyị na-eyiri na ekwentị anyị. Ebumnuche Huawei doro anya, iji bulie ụlọ ọrụ ahụ ma meghee ohere maka smart na njikọ ndụ.
Teknụzụ ohuru sitere na HarmonyOS
HarmonyOS na-ezube igbanwe azụmaahịa nke ndị na-emepụta akụrụngwa, na-enyere ha aka ịgbanwe ngwaahịa na ọrụ. Kama ịre ngwaahịa, ọ ga-etinye akụrụngwa akụrụngwa nke ngwaọrụ niile enwere ike ijikọta ibe ya. Ekele maka ụdị azụmaahịa ọhụrụ a, ihe kariri ndi oru 20 abụrụla akụkụ nke HarmonyOS ecosystem.
Enweela njikọ n'etiti ngwaọrụ dị iche iche na-enweghị nsogbu, na-ekwe ka ndị ọrụ ọ bụla ejikọtara na gburugburu ebe obibi nwee akụrụngwa dịka ịmetụ ekwentị gị aka na ngwa ọrụ ma jikọọ ya ozugbo ma si otu a jiri anya nke uche hụ ihe omuma nile nke ngwaọrụ a na ekwenti anyi. N'otu oge ahụ, akụrụngwa ndị a ga-enwe ike ịkọrọ anyị nwaafọ banyere ọrụ ha.
HarmonyOS ga - abụ ihe eji emeghe ngwa ngwa ngwa ngwa Huawei kachasi nso. Oge mmepe nke Onye Mmepụta Huawei na-akwụsị n'ọtụtụ nnukwu obodo, gụnyere Shanghai na Guangzhou. iji nye mkparịta ụka na-atọ ụtọ banyere teknụzụ na ọrụ ga-abịa n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Huawei na-egosi beta ọrụ nke HarmonyOS 2.0 maka ekwentị
Pịa 3D, PS5 ekweisi nwekwara oké mgbanwe [Review]
Melomania Touch, ọmarịcha ekweisi si Cambridge Audio